SOMA 2015, egwuregwu ọhụrụ egwu na Mac App Store | Esi m mac
SOMA 2015, bụ egwuregwu sci-fi egwu si na Frictional Games, ndị okike nke 'Amnesia: Ọchịchịrị Ọchịchịrị'. Ọ bụ akụkọ na-eyi egwu banyere njirimara, akọnuche na ihe mmadụ ịbụ mmadụ pụtara. Egwuregwu e bipụtara na Mac App Store a December 23 gara aga, ma ọnụ ya na 29,99 €.
Redio nwụrụ anwụ, nri na-agwụ, igwe na-echekwa na ha bụ mmadụ. Margbọ mmiri PATHOS-II nwere nsogbu na anyị ga-eme ụfọdụ mkpebi siri ike. Nke a bụ vidiyo nke ụgbọala na-adọkpụ nke Soma 2015.
Tinye ụwa nke 'SOMA 2015' na na-eche ihe egwu ndị e liri n'okpuru ebili mmiri nke oké osimiri ihu. Detuo site na njedebe mechiri emechi na akwụkwọ nzuzo iji kpughee eziokwu n'azụ ọgba aghara ahụ. Chọọ ndị ikpeazụ fọdụrụ na-ekere òkè na ihe omume ndị ga-emecha mezie akara aka nke ọdụ ahụ. Ma kpachara anya, ihe ize ndụ na-ezo n'akụkụ ọ bụla: ụmụ mmadụ mebiri emebi, ihe gbagọrọ agbagọ, nzuzu robot, na ọbụna igwe na-enweghị atụ na-enweghị atụ na ọgụgụ isi dị ukwuu.
Ga-achọta ụzọ emeso onye ọ bụla n'ime ha. Naanị cheta na n'ọgụ, ị na-apụ ndị iro gị, ma ọ bụ na-agba ụkwụ. A na-ahụ egwuregwu ahụ naanị na Bekee.
Ọhaneze: 23 / 12 / 2015
Onye Mmepụta: Egwuregwu Egwuregwu AB
Mmekọrịta: OS X 10.9 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, 64-bit processor.
Download SOMA 2015, site na Mac App Store site na ịpị njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » SOMA 2015, egwuregwu ọhụrụ egwu na Mac App Store
Remote File Manager, ntụrụndụ malitere